Global Voices teny Malagasy · 19 Janoary 2012
Tantara tamin'ny 19 Janoary 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Janoary 2012
Yemen : Andro tsy hihinanana katy ny 12 janoary
Ny katy dia zavamaniry maintso be ravina manome hery mitovy amin'ny amphetamine ary sokajian'ny OMS ho zavamahadomelina. Fitsakotsakoan'ny ankamaroan'i Yemenita saika isan'andro izy ity, na lahy na vavy. Ny tena mampalahelo dia misy ankizy aza efa mitsako azy sahady. Efa zary fahazarana eo amin'ny fiaraha-monina izany fomba izany ary efa lasa miankin-doha...
Eoropa Afovoany & Atsinanana19 Janoary 2012
Ireo hetsi-panoherana talohan'ny fifidianana ny volana Desambra 2011 dia ahitàna karazany roa : 'Mpanohitra matihanina' sy ireo mponina velom-panahiana. Tao Moscou, ireo karazany roa ireo dia nahavita nivondrona mba hanomana ny iray amin'ireo hetsika am-pilaminana isan'ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena. Tao Saint-Pétersbourg, na izany aza, ilay famoriam-bahoaka dia...
Etazonia19 Janoary 2012
Tsy ijeren-dry zareo izay fampitandreman'ny vahoaka sy ireo mpahay teknolojia, fa ireo mpanao lalàna ao Etazonia dia naminavina tolo-dalàna roa, ny Stop Online Piracy Act (SOPA) sy ny Protect IP Act (PIPA), izay tena fampihorohoroana marina sy tena zava-doza ho an'ny fisofakan'ny aterineto manerana izao tontolo izao. Ho setrin'izany, ny...